Ndụmọdụ maka ịlanarị telecommuting | Bezzia
Ndụmọdụ maka ịlanarị telecommuting
Maria onyekwere | 15/09/2021 10:00 | Nwanyi Executive
Ọrịa ọjọọ agbanweela ọtụtụ omume anyị. N'oge mkpọchi ọtụtụ n'ime unu ga -arụ ọrụ site n'ụlọ, ejiri m n'aka na ọ bụghị unu niile ga -enweta nke unu n'ọfịs ozugbo emechara nke a. Ọ bụ ya mere anyị ji chee na ụfọdụ ndụmọdụ maka ịlanarị telefon ha nwere ike ịbara gị uru.
Ịrụ ọrụ ekwentị nwere uru nke anyị niile nwere ike ịhụ: anyị na -echekwa na njem ma na -anụrị oge mgbanwe. Agbanyeghị, ọ bụ naanị ndị n'ime anyị nọ na telecomm ekwentị ruo ọtụtụ afọ anyị makwaara ihe isi ike ha. Anyị ahụtala ha wee chọta ụfọdụ ngwa bara ezigbo uru iji merie ha.
1 Debe oke maka ụbọchị ọrụ
2 Mepụta "mode" ọrụ
3 Kụziere ezinụlọ
4 Hazie usoro ihe omume gị
5 Si n'ụlọ pụọ
Debe oke maka ụbọchị ọrụ
Mụta ijikwa oge ọ bụ isi mgbe ị na -arụ ọrụ ekwentị. Eziokwu nke inwe mgbanwe oge ka ukwuu na ọfịs ụlọ nwere ike ịgba anyị ume ịgbatị oge ọrụ anyị, ma ọ bụ n'ihi na anyị na -eyigharị oge, ma ọ bụ n'ihi na ọrụ ahụ agwụla, a na -anwa anyị ịga n'ihu na -aza ozi ịntanetị.
Tinye oge anyị ji arụ ọrụ n 'ụlọ ọ dị mkpa ka ụbọchị anyị ghara inwe awa 24. Ọ bụrụ na ha esetịpụtaghị gị usoro ihe omume kama ha setịpụrụ ihe mgbaru ọsọ, belata awa gị. Kpebie site na oge ruo oge ole ị ga -aga ọrụ na mgbe ị ga -ezu ike. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmịpụta ihe na idobe nguzozi n'etiti ọrụ gị na ndụ ezinụlọ, ị ga -amụta ịkwụsị ọrụ ma kwanyere oge ezumike gị ùgwù.
Mepụta "mode" ọrụ
Mgbe mmadụ malitere ime telecommute, ọnwụnwa na -eme ka mmadụ ghara inwe mkpa ahụ iji ejiji iji gaa ọrụ. Ọ na -abụkarị njehie mbụ na -ejikọ ọtụtụ ndị ọzọ. Ma ọ bụ na ịlanarị telefon ọ bụ ihe dị mkpa iji tinye omume ndị na -eme anyị banye ọnọdụ ọrụ.
Dị iche na ọnọdụ ọrụ site na ọnọdụ ezinụlọ ọ bụ igodo ka isi anyị na -arụ ọrụ nke ọma. Ọzọkwa ịkụziri ezinụlọ anyị, ọ bụrụ na anyị nwere otu, oge ha kwesịrị na mgbe ha ekwesịghị ịkwụsị anyị. Họrọ ebe ị ga -arụ ọrụ Na ị na -eji naanị mgbe ị na -arụ ọrụ ma na -eji ejiji dị ka a ga -asị na onye ọ bụla nwere ike ịpụta n'ụlọ gị n'oge ọ bụla. Tinye uche n'ọrụ gị ma ọ bụrụhaala na ọ dị mkpa wee chefuo ohere ahụ ma ọ bụ chịkọta ihe ọrụ gị n'ime kaboodu wee mee onwe gị ahụ iru ala.
Mgbe onye ọ bụla nọ n'ụlọ na -ekwuteghị ekwentị mbụ, a na -amanye ezinụlọ dum ịmalite usoro ọhụrụ. Na mgbanwe niile na omume na omume chọrọ oge mmegharị. Anyị na ndị ezinụlọ anyị na -akparịta ụka, na -akọwa usoro ihe omume anyị yana na ọ bụrụgodi na ịnọ n'ụlọ ị gaghị enwe ike zuru oke ruo mgbe ngwụcha ụbọchị gị bụ isi mmalite ọ bụla dị mma.
Ọnwụnwa ahụ Ọ ga -akpọ ndị ezinụlọ gị ka ha kwụsịtụ gị n'ụbọchị ndị mbụ mgbe ị na -arụ ọrụ na gị ka ị na -aga ọrụ ụlọ nke nwere ike ichere ma ọ bụ nwee anụrị ụfọdụ ị na -enweghị ike ịnweta n'ọfịs. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịdọpụ uche n'ime izu ndị mbụ, yabụ n'oge ahụ ọ kadị mkpa ka ị kwụsie ike nakwa na ọ bụrụ na ị nwere onye nọ n'ụlọ mgbe ị na -arụ ọrụ, ha nwere ike ịdọ gị aka na ntị mgbe ị nwere uche, ọrụ otu! Ozugbo ịmara gị niile wee tinye usoro ọhụrụ ahụ n'ime, ihe niile ga -adị mfe ma ị ga -enwekwu mgbanwe.
Hazie usoro ihe omume gị
Ọ bụrụ na ị buuru ihe omume mgbe ị gara ọfịs, gịnị kpatara ịkwụsị ugbu a? Hazie nhazi oge gị dịka i mere na mbụ ma nyochaa ọrụ ndị ahụ kwa ụtụtụ, na -ebute ihe ndị kacha mkpa ụzọ ka oge na -aga. Dee site na oge ruo oge ole ị ga -arụ ọrụ, oge ole ị ga -arara n'etiti ehihie iri nri na izu ike ... Ị nwere ike ime ya site na iji akwụkwọ akụkọ, kalenda Google ma ọ bụ ngwa dị mfe nghọta dị ka Todoist.
Si n'ụlọ pụọ
Mgbe anyị na -akpọ telecommute, anyị na -efufu akụkụ ọhaneze nke ịga n'ọfịs, isoro ndị ọrụ ibe anyị na -akparịta ụka ma ọ bụ soro anyị rie kọfị mgbe anyị na -apụ. Inertia, Ọzọkwa, nwere ike ịkwali anyị ka anyị nọrọ n'ụlọ ka anyị gachara ọrụ ma iguzogide ga -adị mkpa iji lanarị ekwentị. Mgbe ị na -arụ ọrụ telefon ọ dị mkpa karịa ma ọ bụrụ na ọ ga -ekwe omume izute ndị enyi, sonye na egwuregwu otu, gaa rie nri ma ọ bụ gaa njem mmụta izu ụka ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » si ebi ndụ » Nwanyi Executive » Ndụmọdụ maka ịlanarị telecommuting
Otu esi etinye ihe ịchafụ dị ka ihu gị si dị